Iindawo ezingama-25 zokuDibana kunye neeNkqubo: Uluhlu lwe-A ukuya ku-Z lweeWebhusayithi zokuSebenza eziSimahla kunye nokuHlawula eziHlawulwayo ngo-2021 - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila I-25 + Iindawo zokuBonana eziBalaseleyo ze-2021: Ukusuka kubuDlelwane obuNzulu ukuya kwiiNkqubo zokuDibana ngokuDala, Fumana iiSingles kunye neMatch kufutshane nawe
I-25 + Iindawo zokuBonana eziBalaseleyo ze-2021: Ukusuka kubuDlelwane obuNzulu ukuya kwiiNkqubo zokuDibana ngokuDala, Fumana iiSingles kunye neMatch kufutshane nawe
Buza umntu into oyithandayo ukuthandana iwebhusayithi, kwaye impendulo iya kwahluka njengoko umntu.
Ngoba? Kuba abanye abantu bafuna ii-hookups, abanye bafuna uthando, kwaye abanye bafuna into phakathi.
Ke ngoku are eyona ukuthandana iisayithi? Siziqhekeze ngodidi ukuze kungakhathaleki ukuba ukhangela ntoni, uya kuyifumana kolu luhlu lweendawo ezingcono onokuzisebenzisa ngo-2021.
Ezona ndawo zokuBonana ziBalaseleyo kwi2021
Eyona ilungele ubudlelwane obunzulu- Umtshato
Eyona ilungele abafundi abangabodwa abafunda eyunivesithi- Abangenawo Elite
Indawo efanelekileyo yokungena Umhlobo womntu omdala
Eyona ilungele iingcali ezixakekileyo- Nguyenduyen1
Eyona ndawo ingaphezulu kwama-50 IsilivereSingles
Eyona ndlela ilungileyo yokuthandana Bumble
Eyona nkqubo intsha yokuthandana- Ihenjisi
Indawo efanelekileyo yokuthandana neswekile- Ukufuna
Eyona ndawo yokuthandana ibalaseleyo yabantu abangamaJuda- JDate
Indawo efanelekileyo yokutshata- UAshley Madison
Eyona ndawo yamaKhatholika yokuthandana- Umdlalo wamaKatolika
Indawo efanelekileyo yamanye amazwe- zoosk
Olona hlobo luphambili lokwenza amadinga- I-Reddit R4R
Eyona ndawo yokubonisana simahla- OkCupid
Indawo ezigqibeleleyo zaseAsia zokuthandana kwi-US - AsiaDate.com
Eyona ilungileyo ukunceda ngemihla - Umdlalo.com
Eyona ndawo ingaphezulu kwama-50 yokuthandana e-UK - Ixesha lethu
Eyona ndawo ingcono yamaKristu - UmKristu Mingle
Eyona ilungele iintlanganiso ezifutshane - Isilinganisi
Eyona ilungele imihla yama-Afrika aseMelika- Abantu abaNtsundu
Eyona LGBTQA + yabasetyhini yokuthandana usetyenziso- YAKHE
Eyona ilungele ukuthandana kwezifundiswa- Ikofi idibana neBagel
Eyona ilungileyo kwii-gay hookups- Isitshisi
Eyona ilungileyo kwiintsuku zaseCanada - Intlanzi eninzi
Eyona nkonzo igqibeleleyo yokuthandana- UManyano
1. Umtshato -Okugqwesileyo ekufumaneni ubudlelwane obuluqilima
I-Eharmony idibanise izigidi zezibini-enyanisweni, abasebenzisi be-438 batshata nomntu abadibana naye kwiwebhusayithi yonke imihla. Idatha ixhasa oku: isifundo se-2018 esigama lingu-eharmony njengeyona ndawo inokubangela ulwalamano olonwabileyo.
Kwisiza, uya kuphendula imibuzo ebanzi yophando. Le Sistim yokuTshintshana kokuhambelana isebenzisa iminyaka engaphezulu kwamashumi amabini yophando ukuze ikubonise ngeendlela zokuthandana kwi-Intanethi. Le ndlela yokukhetha, eqhutywa yidatha yenza i-eharmony ibe lukhetho olufanelekileyo ukuba ujonge ubudlelwane obunzulu. Unokufunda ngokupheleleyo Uphengululo lweHarmony Apha.
Mbini. Abangenawo Elite Ama-85% amaLungu afundisiwe eyunivesithi
I-Elite Singles inobulungu obufundileyo, ke lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna iincoko ezilungileyo: i-85% yamalungu ayo anemfundo engaphezulu komndilili, ngelixa i-90% ingaphezulu kwe-30, yongeza amava obomi kumxube.
Indawo isebenzisa ialgorithm esekwe kwiimpendulo zakho kwiphepha lemibuzo ukukutshatisa nezinye iingoma. Isetyenziswa ikakhulu ngabo bafuna ubudlelwane bexesha elide, kubandakanya nakwamanye amazwe - isebenza kumazwe angama-25.
3. Nguyenduyen1 -Eyona ilungele abaSebenzi abaXakekileyo
Kukutya kwasemini nje kukuseta nomlingisi womlinganiso xa ubhalisa. Ngomnxeba kunye nabo, uya kuphendula imibuzo malunga nawe kunye neenjongo zakho zothando.
Aba badibanisi bakufumanisa umdlalo omnye ngexesha, besabelana ngamagama okuqala kuphela. Baza kulungiselela ixesha kunye nendawo nomdlalo wakho (oku kunokuba sisidlo sasemini, iziselo, okanye ibrantshi-kuxhomekeke kwishedyuli yakho), kwaye kufuneka ubonakalise.
Emva koko, uya kunika ingxelo kumlingisi wakho ukuze ufumane imihla engcono kwikamva.
Isibonelelo esinye senkonzo kukuba ayikuchithi ixesha. Abantu obathandayo bakhethwe ngesandla ngumntu oyiqondayo into oyifunayo, kwaye imihla emifutshane yindlela elungileyo yokudibana nomntu ngaphandle kokuchitha ixesha elide ulungile.
Zine. IsilivereSingles -Eyona Webhusayithi yokuBhala ingaphezulu kwama-50
Phakathi kweendawo zokuthandana zabantu abangaphezu kwama-50, iSilverSingles ibijikeleze iminyaka eli-19. Inkonzo iqinisekisa iprofayili nganye ngesandla, iqinisekisa ukuba abasebenzisi bayo bayinyani kwaye bakhuselekile.
Ngokusekwe kwiphepha lemibuzo ngobuntu kwaye yintoni ebalulekileyo kuwe, uya kufumana iimatshisi ngokusekwe kwindawo okuyo, izicwangciso, iinjongo kunye nobuntu.
Ungasebenzisa iSilverSingles kwindawo yabo okanye ngeapp yabo. Amalungu asisiseko asimahla.
5. Bumble -Eyona Ndawo yokuHlala ngokuNgaqhelekanga
Ibumbile yahlukile phakathi kweapps kuba ivumela abantu basetyhini ukuba benze inyathelo lokuqala. Amadoda awakwazi ukunxibelelana nabasetyhini ade umfazi afikelele.
Insiza idibanisa kakuhle nemidiya yoluntu, kubandakanya i-Facebook, iSpotify, kunye ne-Instagram, ukuze ubonise iinkalo ezahlukeneyo zobuntu bakho. Unokuqinisekisa kwakhona iprofayile yakho ukuze ucofe abanye abasebenzisi abaqinisekisiweyo.
I-Bumble yeyona nto ilungele ii-hookups ezingaqhelekanga kuba iqonga linyanzelisa kunxibelelwano olukhawulezayo. Nje ukuba utshatise, uneeyure ezingama-24 zonxibelelana naloo mntu, okanye umdlalo uyanyamalala.
Kukwanjalo nakwimiyalezo, ephela emva kweeyure ezingama-24 ukuba umntu omnye akabhali mva. Kwabo bacinezelwe ixesha, iBumble ibonelela simahla Yandisa imidlalo kunye nemiyalezo yonke imihla.
6. Ihenjisi -Eyona App intsha yokuDibana
Iphinde yenziwa kwakhona ngo-2016, iHinge yi- # 1 ikakhulu isisixhobo sokuthandana esichazwe kwicandelo lomtshato laseNew York Times.
Ialgorithm yabo ifumana uphononongo olulungileyo: iipesenti ezingama-75 zabasebenzisi beHinge bafuna ukuya kumhla wesibini bakube bephumile kwimidlalo yabo. Uhlelo lokusebenza luphucula umdlalo wakho njengoko unika ingxelo emva kwemihla.
Iqonga likaHinge likhethekile kuba wakube utshatile, usetyenziso lushukumisela ukuba uthande okanye ubeke izimvo kwinxalenye ethile yeprofayili yomnye umntu. Oku kunqongophala kwemiyalezo yohlobo oluthile kwenza iHinge ibe longezo elitsha elinomdla.
7. I-AFF -Eyona ndawo yokuKhangela
Oku usetyenziso oluxonxiweyo ayisiyo eyabantu abafuna ubudlelwane bexesha elide. Inika iindlela ezimbini eziphambili: ukudlala ngothando (kwiapp) okanye ukudibanisa.
Uhlelo lokusebenza olunokwabelana ngesondo, uMfumani woMhlobo waBadala uyaziwa ngokuhlangana okufutshane. Nangona kunjalo, ikwaquka iindlela ngeendlela zonxibelelwano: imiyalezo, ividiyo ( imihla ekwi-Intanethi ), Hlala imilambo, izingxoxo zeqela.
I-AFF ikwalungele ii-hookups ngenxa yenkqubo yokubhalisa ngokukhawuleza. Ngokungafaniyo nezinye iisayithi, ezinokubandakanya amaphepha emibuzo amade, i-AFF inenkqubo yokubhalisa yesibini-yesibini eya kukuvumela ukuba uqalise ukukhangela phantse kwangoko.
8. Ukufuna -Eyona ndawo yokuDibana neSwekile
Le webhusayithi iqhagamshela abantu abancinci (Iintsana ezineswekile) nabantu abadala, abazizityebi (iiSugar Daddies / Mommas).
Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-20, le ndawo inezinto ezisisi-8 seentsana zeSwekile kunye nezigidi ezibini zeSugar Daddies / Mommas. Ivumela aba basebenzisi ukuba banxibelelane ngaphandle kokuhanahanisa, umntu ngamnye echaza imigaqo yakhe ngaphambi kokudibanisa.
Ukuba ungumntu omncinci ofuna ubudlelwane nabantu abadala (okanye ngokuchaseneyo), le ndawo inabasebenzisi abafuna iintlobo ezifanayo zokuhlangana, ishenxise isidingo sokuhluzwa ixesha elide kwiiprofayili kunye neengxoxo ezingathandekiyo. Ikwayenye yeziza ezimbalwa ezinomlinganiselo omkhulu wabasetyhini emadodeni.
9. JDate -Eyona Ndawo yokuDibana yaBantu abangamaJuda
IJDate yinkqubo enye yee-singles zamaJuda. Eyilwe ngo-1997, i-JDate ngoku iyafumaneka kwihlabathi liphela, ikuvumela ukuba unxibelelane nabasebenzisi bamaJuda ngeelwimi ezintlanu ezahlukeneyo (isiNgesi, isiHebhere, isiFrentshi, isiJamani, neSpanish).
Kulabo bafuna umdlalo wamaJuda nabantu ababelana ngokholo lwakho, iJDate ibonelela ngokhetho olubanzi kubasebenzisi. Ngapha koko, i-JDate inoxanduva lwe-52% yemitshato yamaJuda eyaqala kwi-Intanethi.
Zombini ezentlawulo zasimahla okanye zepremiyamu kwiJDate (kwi- $ 59.99 ngenyanga), ungathumela umyalezo nakubani na. Ukuphononongwa kukhathalelo loMthengi kwiprofayili nganye, kuqinisekisa abasebenzisi bokwenene.
10. Umdlalo wamaKatolika - Eyona Ndawo yokuDibana yamaKatolika
Enye yeenkonzo ezininzi zamaKristu, Umdlalo wamaKatolika, ikunceda ufumane uthando kunye nelungu lenkolo yamaKatolika ngokuthe ngqo.
Ngabasebenzisi abangaphezulu kwesigidi esinye, uMdlalo wamaKatolika uyanyusa ukuthandana ejolise ukholo . Ngamanye amagama, abasebenzisi bayo ikakhulu bafuna ubudlelwane bexesha elide namanye amaKatolika.
Ubulungu buxabisa i-29.95 yeedola ngenyanga, kodwa beza nesiqinisekiso. Ukuba uhlangabezana neziqinisekiso ezithile kwiinyanga ezintandathu zokuqala, indawo iqinisekisa iinyanga zakho ezintandathu ezizayo mahala.
Ukuxhaswa ziinkokeli ezahlukeneyo zamaKatolika, uMdlalo wamaKatolika uneminyaka engaphezu kwama-20 yamava edibanisa amaKatolika.
Shumi elinanye. zoosk -Isiza sokuDibana saSimahla samanye amazwe
Eyona ndawo ibalaseleyo yokuthandana nabantu bamanye amazwe, iZoosk inamaculo angama-40,000,000 kwihlabathi liphela. Aba basebenzisi bathumela imiyalezo ezigidi ezi-3 yonke imihla ngeelwimi ezingama-25 ezahlukeneyo. Ifumaneka kumazwe angaphezu kwama-80, iZoosk liqonga lehlabathi lokwenyani.
Ukusekwa ngaphezulu kweminyaka eli-14, iZoosk isebenzisa Itekhnoloji yokuziphatha komlinganiso ukutshatisa abasebenzisi bayo kunye nee-singles ezifanelekileyo.
Simahla ukuzama, ukubhaliswa kweZoosk ke kuxabisa i $ 29.99 ngenyanga.
12. I-Reddit R4R -Eyona Subdredithi yokuDibana (iiNtengiso zaBantu ezikwi-Intanethi)
I-R4R sisivumelwano sangaphantsi esidibanisa abantu. I-R4R imele Umbuyekezi wembuyekezo , kwaye indawo ayinayo inkqubo ehambelanayo. Endaweni yokuba, le yenye yezona ndawo zibalaseleyo kwi-Intanethi ukuthumela ubuntu.
Aba bantu bahluka kakhulu kuxhomekeke kubasebenzisi abafuna ntoni. Oku kunokuba yiyo nayiphi na into kumaqabane omsebenzi ukuya kumaqela, ukuthandana, ii-hangout, abalingani bomphefumlo, kunye nolunye ubudlelwane.
Ngenxa yokuba i-subreddit, i-R4R inemisebenzi yokuthumela kunye nokuthumela imiyalezo. Nangona kunjalo, inemithetho embalwa kunye nezithintelo kuneeapps (nangona inezinto ezithile ezinxulumene nobudala, ukuba bucala, ukuba semthethweni, kunye nokuziphatha). Umzekelo, iiposti ze-NSFW zivumelekile, kodwa kufuneka zifakwe i-tag ukuze abanye abasebenzisi babaphephe xa benqwenela.
I-Reddit yindawo elungileyo yengcebiso ngokuthe ngqo kwimeko yakho kunye neengcebiso zokuthandana ngokubanzi. Jonga ii-subreddits UkuDibana kwi-Intanethi , r / DatingOverThathu, r / ukuthandana_ingcebiso. r / ubudlelwane, r / ukuthandana, r / Ukuthandana ngokusebenza, r / NgonaphakadeUkuthandana Kuphela, r / UbudlelwaneOver35, okanye r / Ukuthandana kweCatholic.
13. okcupid -Eyona ndawo yokuDibana Simahla
Ngezinto ezininzi zokuthandana, ufumana oko uhlawulayo. I-OkCupid yile eyona nkonzo yasimahla ngenxa yeenkcukacha zayo: unokufumana okuninzi malunga nabasebenzisi ngaphambi kokuba uqhagamshele, ekhokelela kwimidlalo engcono.
Ifumaneka kokubini kwindawo yedesktop kwaye njengeapp, i-OKCupid ibonelela ngamawaka emibuzo yeprofayile, ukuze ufumane umdlalo wento ebalulekileyo kuwe.
Ukunikezela ngama-22 ngokwesini kunye nokukhethwa kokuziqhelanisa ne-13, i-OkCupid nayo ibandakanyiwe.
14. UAshley Madison -Eyona ndawo yokuDibana ngokutshatileyo
Indawo yokuthandana yemicimbi, uAshley Madison udibanisa abasebenzisi beentlanganiso ezifihlakeleyo. Ngokungafaniyo nezinye ii -apps, isiza asinxibelelananga nezinye iiprofayili zemidiya yoluntu, ngenxa yoko akunakufane udibane okanye ubonwe ngabantu osele ubazi. Iphakathi kwezona ndawo zibalaseleyo zomhla wabasebenzisi abatshatileyo, njengoko abantu bobabini beyiqonda le meko.
U-Ashley Madison ukwabonelela ngeempawu zokuhamba kwabo batyelele ezinye izixeko. Oku kukuvumela ukuba unxibelelane nabasebenzisi kuloo ndawo ngaphambi kwexesha, ukuseta imihla xa ufika.
Eyona ndlela yokuPhila ngokuPhambili kwi-Intanethi: 2021
Shumi elinantlanu. AsiaDate.com -Eyona ndawo i-Asia yokuDibana kwi-Intanethi eMelika
AsiaDate idibanisa abantu abavela kwihlabathi liphela kunye singles zaseAsia. Ngaphezulu kweminyaka elishumi yamava, abasebenzi besiza baqinisekisa ilungu ngalinye ukuqinisekisa ubunyani. Nje ukuba uqinisekisiwe, ungathetha, ufowune, okanye uthumele iileta okanye izipho.
16. Umdlalo.com -Eyona ilunge kakhulu kuNcedo ngeMihla
Enye yezona ndawo zindala zokuthandana, iMatch.com, yaqala ngo-1995. Iqukethe iinkangeleko ezineenkcukacha, ukudibana kwamalungu, kunye nomqeqeshi wokuthandana okwenyani ukunceda amalungu enze nantoni na ekuqhekezeni umkhenkce ukuze eze nemibono yomhla.
17. Ixesha lethu -Eyona ndawo ingcono yokuthandana ingu-50 + e-UK
Isiza sabangama-50 + abangatshatanga, i-timetime.com yethu inika ukhetho kungekuphela kwabo bafuna ukutshata kunye nobudlelwane bexesha elide kodwa nabo bafuna ubuhlobo kunye nobudlelwane beplato. Isiza sibonisa i-imeyile kunye nokudlala ngothando, ukuvumela ukuba ubone ukuba ngubani ojonge iprofayile yakho.
18. UmKristu Mingle -Eyona ndawo yokuDibana yamaKristu
Ngama-15 ezigidi zamaKristu angatshatanga, oku Indawo yokuthandana yamaKristu kunceda abasebenzisi abafuna i Ubudlelwane obugxile kuThixo . Amalungu abo ajolise ikakhulu ekufumaneni ubudlelwane obunzulu. Indawo inikezela ngesilingo sasimahla, emva koko babiza i- $ 49.99 ngenyanga.
19. Abantu abaNtsundu -Eyona ilungileyo kwiMihla yase-Afrika yaseMelika
Ngaphezulu kweminyaka eli-18, iBlackPeopleMeet ibonelele ngeqonga labangatshatanga base-Afrika abafuna uthando. Abasebenzisi besiza abangama-100,000 + banokutshintsha ii-flirts okanye ii-imeyile, kunye nokubona ukuba ngubani ozijongileyo iiprofayili zabo.
Amashumi amabini. Isilinganisi -Eyona App yasimahla yokuHlala ngokuNgaqhelekanga
Le app yokuthandana inedumela elandulelayo. Ngokubhalisa ngokukhawuleza, i-Tinder kulula ukuyisebenzisa kwi-hookups, nangona inani elikhulu labasebenzisi lithetha ukuba abaninzi bafuna ubudlelwane.
amashumi amabini ananye. Ikofi idibana neBagel -Eyona ilungileyo yokuDibana kwabaNgcali
Abasebenzisi abangama-96% kwiKofi badibana neBagel banesidanga seBachelor, ngelixa ngaphezulu kwesithathu beneMasters. Iiprofayili ezibanzi zikwenza oku kube yindawo elungileyo yezazi, njengoko ubona ukuba ngubani owabelana nomdla nawe kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo.
22. YAKHE -Eyona LGBTQA + yaBasetyhini abaDala yokuSebenza
YAKHE uhlelo lokusebenza lokuthandana ngokukodwa kwabafazi be-LGBTQA,, olwenziwe ngabafazi abaphambili. Abasebenzisi babo abazizigidi ezi-4 bafumana ukufikelela kumnyhadala wobuntu, uluntu ngaphakathi kwiapp, kunye neemodareyitha zeapps ukuqinisekisa ukuba banamava amnandi.
2. 3. Isitshisi -Eyona ilungileyo kwi-LGBTQA + kwiiHookups
Ngabasebenzisi abangamadoda ikakhulu, uGrindr ugxile kubungqingili, bi, trans, kunye noluntu lwasekuhlaleni. Uhlelo lokusebenza lutshintshe njani ukuthandana sites gay kunye neeapps zisebenza kunye neenkonzo ezisekwe kwindawo. Ngoku usetyenziso lweselfowuni oludumileyo, iGrindr, ikuvumela ukuba uhlele abasebenzisi ngomgama ngokusekwe kwindawo yeGPS.
24. Intlanzi eninzi -Eyona ndawo isimahla yaMaxesha eCanada
Indawo yaseCanada ibonelelwa ngeelwimi ezilithoba, uqinisekisa ukuba unokunxibelelana nabasebenzisi abavela kwihlabathi liphela. Yasekwa ngonyaka ka-2003, le ndawo inikezela ngeenkcukacha ezithe vetshe echibini layo elikhulu lamalungu.
25. UManyano -Eyona App yokuNandipha yokuHanjiswa
Umbutho ubonelela ngonxibelelwano kunye nee-singles kwizixeko ezikhethiweyo. Indawo inikezela ngamalungu amathemba ama-3 yonke imihla kwaye ikuvumela ukuba uncokole nabo ngevidiyo. Ikwavumela ukuba uqhagamshele iprofayile yakho kwi-LinkedIn kunye ne-Facebook ukuvimba unxibelelwano, uqinisekise ukuba uyimfihlo.
Iindawo ezigqibeleleyo zokuthandana: ii-FAQs
Kutheni usebenzisa iiNdawo zokuDibana kwi-Intanethi?
IiSayithi zemihla zikunika ithuba lokudibana nemidlalo enokubakho ngakumbi kunokuba ubunokwenza kubomi bemihla ngemihla. Nokuba unesangqa esincinci sentlalontle, ujonge ukwandisa unxibelelwano lwakho, okanye ufuna nje iimfuno ezingafumanekiyo kwindawo ohlala kuyo, ukusebenzisa ezi ndawo kunokwandisa umhlaba wakho.
Ngapha koko, ukusebenzisa isiza okanye usetyenziso ukudibana neqabane elithandanayo likuvumela ukuba ukhethe ngakumbi. Ukuba kubalulekile kuwe ukuba ube neqabane elinomdla ofanayo, ii -apps ezininzi zikuvumela ukuba ukhethe koku.
Okokugqibela, kuqhelekile ukusebenzisa ezi sayithi ukufumana uthando: malunga ne-2/5 yamaMelika adibana namaqabane abo exesha elide kwiziza zomhla.
Ngaba iiNkqubo zokuDibana zikhuselekile?
Iiapps zikhuseleke kuphela njengabasebenzisi bazo. Hlala uqaphele.
Ukuba nononophelo kwiiapps kuthetha ukuzibandakanya nabasebenzisi abaqinisekisiweyo; Ezinye ii -apps zinamalungu abasebenzi aqinisekisa amalungu ngesandla, akunika ukhuseleko ngakumbi.
Nangona kunjalo, kusabalulekile ukulandela izikhokelo zokhuseleko xa uthandana nomntu owadibana naye kwi-intanethi.
Uhlala njani ukhuselekile ngelixa uthandana kwi-Intanethi?
Ungaze unikezele ngeenkcukacha zakho kumntu odibene naye kwi-Intanethi, ngakumbi ngaphambi kokuba udibane nomntu. Oku kubandakanya igama lakho lokugqibela, umqeshi, idilesi, kunye nendawo ohlala kuyo.
Xa udibana nomntu odibene naye kwi-intanethi, qinisekisa ukuba imihla yakho yokuqala yenzeka kwiindawo zikawonke-wonke. Isenokuba yindawo yokutyela, indawo yokutyela, iholo yemiboniso bhanyabhanya, okanye naphi na apho bakhoyo abanye. Ziphephe iindawo ezizimeleyo ezifana neepaki, kwaye ungaze umeme umntu ongamaziyo ekhayeni lakho.
Okokugqibela, ngena kunye nomhlobo ngaphambi komhla wakho ukuze ubazise apho uya kuba khona kwaye xa ulindele ukuza ekhaya. Bazise xa ufika ekhaya. Ukufumana ukhuseleko olongezelelweyo, bacele ukuba batsalele umnxeba okanye babhalele umyalezo ngomhla wokuqinisekisa ukuba ulungile.
Ndenza Njani ukugqiba ukuba yeyiphi indawo yokuthandana eyiNdifanele?
Ngaba ujonge into yexesha elide okanye engaqhelekanga? Kuqala, jonga into ojonge ukuyizuza kulwalamano olutsha.
Ukuba unethemba lokufumana into enzulu, kuya kufuneka ngokuqinisekileyo ucime iiapps kunye neendawo ezinje ngeTinder okanye uAshley Madison. Kwelinye icala, ukuba akukho-imitya-eqhotyoshelweyo yi-fling yile nto uyikhangelayo, indawo yokuthandana enje nge-eHarmony eqhayisa ngomgangatho ophumeleleyo womtshato ayizukuba yeyakho.
Ufumaneka phi? Konke kulungile kwaye kulungile ukukhetha indawo yokuqala yokuthandana kwi-intanethi kodwa ukuba ayithandwa apho uhlala khona, uya kuba nexesha elinzima lokufumana imatshisi yendawo. Jonga iisayithi zokuthandana ezisetyenziswa ngabantu kwindawo yakho-ngaphandle kokuba, kunjalo, ukhetha ukuqala umgama omde.
Lunjani uhlahlo-lwabiwo mali? Ezinye iisayithi zokuthandana zibiza inyanga nenyanga, ezinye zikhululekile ukusebenzisa iipesenti eziyi-100. Cinga ngendlela ozimisele ngayo ukuchitha. Iziza zasimahla zinokuba yindlela elungileyo yokuqalisa ukuba umtsha xa uthandana kwi-Intanethi. Kodwa ukuba iiveki zibhabha kwaye awuzange ube nomdlalo omnye ophumeleleyo, unokufuna ukuqwalasela ukubhalisela indawo enomrhumo wobulungu.
Umhla wokuqala Iingcebiso
Imihla yokuqala inokoyikisa! Landela ezi ngcebiso ukuze uhlale ukhuselekile kwaye wazi umdlalo wakho ngobuqu:
Gcina ingqondo yakho ivulekile. Abantu banokubonakala bahluke kakhulu emntwini kunokuba besenza kwi-Intanethi, ke yazi ukuba izinto ozilindeleyo zingafuna ukutshintsha.
Musa ukuhamba ngokusesikweni kwangoko. Ukuseta into engaqhelekanga, njengomhla wekofu, kukuvumela ukuba wazane ngaphandle koxinzelelo lokuchitha iiyure kunye.
Hlala ugxile ngoku. Kunqande ukuzisa ubudlelwane obudlulileyo okanye eminye imidlalo kumhla wokuqala.
Hlaziya iincoko zakho ngaphambi kokuba uhambe. Jonga iprofayile yomntu kwakhona kwaye ujonge ukuba uthethe ngantoni ukuba nezihloko ngokubanzi zencoko zilungiselelwe.
Ngaba kunokwenzeka ukuFumana ubudlelwane obuDlalayo ngelixa uthandana kwi-Intanethi?
Ngokuqinisekileyo. Ngapha koko, inani elikhulu lamaMelika lifumana amaqabane awo ngale ndlela. Uphando olwenziwe ngo-2017 lubonise ukuba i-39% yezibini ezitshatileyo ezithandanayo zidibene kwi-Intanethi- zimbini kwezi zibini zizibini.
Iindawo zokuDibana kwi-Intanethi: Izinto eziphambili zokuThathwa
Isitshixo sokuthandana kwi-Intanethi kukwazi into oyifunayo kunye nokufumana indawo ekunokwenzeka ukuba inikezele ngemidlalo efanelekileyo kule ndawo.
Njengoko uphonononga ukhetho lwakho, hlala ukhuselekile, kodwa gcina ingqondo evulekileyo: ngekhe wazi ukuba ngubani onokuphuma abe liqabane lakho lomphefumlo okanye indawo efanelekileyo!
Yintoni oyifumeneyo iziza kakhulu ukuthandana ukuba? Yabelana ngeendawo zakho zokuthandana ozithandayo kunye namava kumagqabantshintshi!
Iingcebiso zokuthandana ezi-5 zaMantombazana aQhelekileyo ukusuka kwiGay Guy
IHillary's Atlantic City Romp
UKate Middleton unendlela ethe ngqo yokuNxibelelana noKumkanikazi uElizabeth
umceli mngeni wegazi. isiqendu 8
ngaba lusuku lokuzalwa lukagoogle namhlanje
izitofu ezifanelekileyo zokutshisa abafazi
zokusebenza ezintsha ukuthandana 2016 simahla